Imveliso yelinen ye-jacquard | Abenzi baseChina base China uJacquard
100% ipholiyesta intaka microseye umnatha interlock ilaphu
Inkcazo Le polyester encinci ye-birdseye mesh interlock fabric, inombolo yethu yenqaku FTT-JB6402, inithiweyo nge-100% ipholiyesta. Ilaphu lentaka elincinci elinamathelayo likwabizwa ngokuba yipin echaphaza umnatha, ifreyim yangasemva, umnatha omncinci njl.njl. Icala layo elingasemva licaba kwaye icala langaphambili linemingxunya yeentaka. I-polyester encinci ye-birdseye mesh interlock ilaphu ayinzima kwaye iyaphefumla ...
I-nylon spandex waffle ilukiweyo yelaphu
Inkcazo Le nylon spandex waffle knit elula yelinen, inqaku lethu lenombolo FTT-JB6402, linithiwe nge-86% yenayiloni kunye ne-14% ye-spandex. I-nylon spandex waffle yelinen eyolukiweyo yelaphu inewaffle texture. Yinto yelaphu ejijelweyo eneendlela ezine ezoluliweyo kunye nokuchukumisa okuthambileyo, eyenza ukuba ibe lilaphu elisebenza ngeendlela ezahlukeneyo ukusebenza nalo. I-nylon spandex waffle knit eyolukiweyo yelaphu iyaphefumla kwaye ilungile kwimidlalo, ...
Inkcazo Le polyester spandex perforated perfated eye mesh fabric, our article number FTT-WB286, knitted with 87% polyester and 13% spandex. I-polyester spandex yetyhefu yentlanzi yamehlo enelinen ye-mesh ilungelelene ngombala kwicala elingaphambili kwaye ithe tyaba ngasemva. Yindlela ezine ezoluliweyo enendawo ethambileyo. Le ipholiyesta spandex perforated intlanzi ilaphu enemingxuma ilaphu iyaphefumlwa kwaye ilungile yemidlalo, yenza ...
Ipholiyesta spandex ulule ibhabhathane mesh jacquard ilaphu
Inkcazo Le polyester spandex yolula ibhabhathane enemingxuma yelinen, inqaku lethu lenombolo FTT-WB5927, linithiwe nge-92% ipholiyesta kunye ne-8% spandex. I-polyester spandex yokolula ibhotolo yebhathane enemingxunya ebukeka bebhabhathane. Yindlela ezine ezoluliweyo enendawo ethambileyo, eyenza ukuba ibe lilaphu elinokusebenziseka kakhulu. Le ipholiyesta spandex ukolula butterfly enemingxuma ngelaphu uyaphefumla kwaye perfec ...